Jabuuti oo Eritrea ku eedeysay inay hubayso Shabaab | Baydhabo Online
Jabuuti oo Eritrea ku eedeysay inay hubayso Shabaab
Dowladda Jabuuti ayaa dhigeeda Eritrea ku eedeysay in ay taageerto Al-Shabaab islamarkaana ay caqabad ku tahay ammaanka guud ahaan Gobolka.
Wakiilka Dowladda Jabuuti ee Golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay Maxamed Siyaad Ducaale ayaa sheegay in dowladda Eritrea ay si toos ah u taageerto Al-Shabaabka Somaliya waxaana uu soo jeediyay in Golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay ay tallaabo ka qadaan dowladda Eritrea.
Danire Ducaale,ayaa soo jeediyay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo hubeeyo Ciidanka Somaliya tababar fiicanna la siiyo si ay uga adkaadaan Al-shabaab,waxaa kale oo uu codsaday in la xoojiyo taageerada Amisom-ta dagaalka kula jirta Al-Shabaab ee Somaliya.
Waxaa uu mr Ducaale ku eedeeyay Eritrea in ay xogta u diiday kooxda dabalka Somaliya iyo Eritrea taas oo uu tusaale u soo qaatay in ay tahay xagjirnimada dowladda Madaxweyne Isias ee Eritrea.
Sidoo kale Dowladda Jabuuti ayaa Eritrea weydiisay halka ay ku dambeeyaan 13 Maxbuus oo Eritrea ay ku qabsatay dagaalkii dhex maray iyada iyo Jabuuti.
Dhanka Dowladda Eritrea Wakiilkeeda Golaha ammaanka Amanuel Giorgio,ayaa dafiray eedda dowladda Jabuuti,waxaana uu xusay in Jabuuti ay iska hadashay hubsiimo la’aan.
Waxaa uu xusay in dowladda Eritrea ay si wanaagsan ula shaqeysay kooxda Qaramada Midoobey u qabailsan dabagalka cunaqabateynta Somaliya iyo Eritrea.
Waxaa uu intaas ki daray Danjire Amanuel in afartii sano ee la soo dhaafay aan wax xiriir ah oo u dhaxeeya Eritrea iyo Al-shabaab la helin, daliil ayuuna ka dhigtay in uusan jirin xiriir ka dhaxeeya Eritera iyo Al-shabaab.